Nni wo yɔnko anim mma onnkogye bosea (1-5)
“Ɔkwadwofo, kɔ ntɛtea nkyɛn” (6-11)
Onipahunu ne onipabɔnefo (12-15)
Nneɛma ason a Yehowa kyi (16-19)
Hwɛ wo ho yiye wɔ ɔbea bɔne ho (20-35)
6 Me ba, sɛ woadi wo yɔnko anim* ama wakogye bosea,+Sɛ woakyia ɔhɔho nsam,*+ 2 Sɛ woahyɛ bɔ ama asum wo afiri,Na sɛ woaka asɛm ama akyerekyere wo* a,+ 3 Me ba, yɛ eyi fa tetew wo ho,Efisɛ woatɔ wo yɔnko nsam: Kɔ, na kɔbrɛ wo ho ase; yɛ ntɛm kɔsrɛ wo yɔnko no.+ 4 Mma w’ani nnkum,Na mma nna mmma w’ani so. 5 Gye wo ho sɛnea ɔtwe gye ne ho fi ɔbɔmmɔfo nsam,Na anomaa gye ne ho fi anomaayifo nsam no. 6 Ɔkwadwofo, kɔ ntɛtea nkyɛn;+Hwɛ n’akwan, na hu nyansa. 7 Onni otitiriw, ɔpanyin, anaa ɔhene, 8 Nanso ɔhwehwɛ n’aduan wɔ ahohuru bere mu,+Na ɔboaboa n’aduan ano wɔ twabere mu. 9 Ɔkwadwofo, wobɛda akosi da bɛn? Bere bɛn na wobɛsɔre afi wo nna mu? 10 Mereda kakra, meretɔ nko kakra,Merebobɔw me nsa ahome kakra;+ 11 Wode saa ara na wo hia aba sɛ ɔkorɔmfo,Na w’ahokyere aba sɛ ɔkorɔmfo werɛmfo.+ 12 Onipahunu ne onipabɔnefo nenam keka atosɛm;*+ 13 Obu n’ani,+ ɔde ne nan kasa, na ɔde ne nsateaa kyerɛkyerɛ nneɛma. 14 Ɔde nkontompo komaBɔ pɔw bɔne daa,+ na ɔsɛe nkurɔfo ntam.+ 15 Ɛno nti, n’amanehunu bɛba mpofirim;Wobebubu no prɛko pɛ,na ɔrennya ayaresa da.+ 16 Nneɛma asia na Yehowa kyi;Yiw, nneɛma ason na ɛyɛ no* tan: 17 Ani a ɛtra ntɔn,+ tɛkrɛma a edi atoro,+ ne nsa a ehwie mogya a edi bem gu,+ 18 Koma a ɛbɔ pɔw bɔne,+ ne nan a etu mmirika kɔ bɔne mu, 19 Ɔdansekurumfo a otwa nkontompo daa,+Ne obiara a ɔsɛe anuanom ntam.+ 20 Me ba, di wo papa mmara nsɛm so,Na mpo wo maame akwankyerɛ.*+ 21 Fa kyekyere wo koma ho daa;Fa bobare wo kɔn. 22 Sɛ wonantew a, ɛbɛkyerɛ wo kwan;Sɛ woda a, ɛbɛhwɛ wo so;Sɛ wunyan a, ɛbɛkasa akyerɛ wo.* 23 Efisɛ mmara nsɛm no yɛ kanea,+Na mmara no yɛ hann,+Na nteɛso a animka de ba no yɛ nkwa kwan.+ 24 Ɛbɛbɔ wo ho ban afi ɔbea bɔne ho,+Na abɔ wo ho ban afi ɔbea a ne bra asɛe* nnaadaasɛm ho.+ 25 Mma wo kɔn nnnɔ no wo koma mu, n’ahoɔfɛ nti,+Na mma n’ani adabadabaa no nntwetwe wo, 26 Efisɛ tuutuuni nti, ɔbarima bedi paanoo sin;+Na ɔbarima foforo yere de, ɔsɛe nkwa* a ne bo yɛ den. 27 Obi betumi de ogya ahyɛ ne kokom a ne ntaade renhyew anaa?+ 28 Anaa obi betumi anantew ogyasramma so a ɛrenhyew ne nan? 29 Saa ara na obiara a ɔne ne yɔnko yere da te;Obiara nni hɔ a ɔde ne ho ka no a, ɔbɛfa ne ho adi.+ 30 Sɛ ɔkɔm de ɔkorɔmfo, na owia ade sɛ ɔde rekum ne kɔm* a,Nnipa remmu no animtiaa. 31 Nanso sɛ wɔkyere no a, ɔbɛbɔ ho mpɛn ason;Ɔde ne fi agyapade nyinaa betua ka.+ 32 Obiara a ɔne ɔbea sɛe aware no nnim nyansa;*Nea ɔyɛ saa no, ɔsɛe ɔno ara ne ho.*+ 33 Ade a obenya ara ne akuru ne animguase,+Na n’aniwu rempopa da.+ 34 Efisɛ ninkuntwe ma okunu bo fuw denneennen,Na sɛ ɔretua so ka a, ɔrenhu mmɔbɔ.+ 35 Biribiara nni hɔ a ebetumi apata no,*Na woma no akyɛde kɛse sɛ dɛn mpo a, ɛrentumi nnwudwo ne bo.
^ Nt., “woadi agyinam ama wo yɔnko.”
^ Kyerɛ sɛ, woakyia ne nsam de ahyɛ bɔ.
^ Anaa “w’ano ayi ka ama wo.”
^ Anaa “keka nsɛm kyinkyim no.”
^ Anaa “ɛbɛkyerɛkyerɛ wo.”
^ Anaa “ɔredi ama ne kra amee.”
^ Anaa “Agyede biara nni hɔ a obegye.”